Fampanajàna ny fihibohana Hitombo avo roa heny ny miaramila hanara-maso
Ny tafika Malagasy dia efa mandray anjara amin` ny ady amin` ny « coronavirus ». Izy no misahana ny fitateran` ireo fitaovana ara-pahasalamana mankany amin` ny faritany.
Misahana ihany koa ny fanarahana maso an` ireo marary hatramin` ny fiarovana ny faritra amin` ny ankapobeany. Nanambara ny Jeneraly Jean-Claude Rabenaivoarivelo fa hampitomboina avo roa heny ny miaramila mandritra ny fihibohana 15 andro andiany faharoa ity eto Antananarivo, Toamasina ary Fianarantsoa. Nampatsiahy ity lehiben` ny Etamazaoron` ny tafika ity fa Madagasikara dia ao anaty ady mahery vaika amin` ny aretina “coronavirus”. Mba ahafahana mandresy ity fahavalo tsy hita maso ity, dia ilaina ny firaisan-kinan` ny vahoaka Malagasy. Miantso ny olom-pirenena izy mba hanaraka an-tsakany sy an-davany ireo fepetra amin` izao fahamehana ara-pahasalama izao.